Custom सुझावहरू तपाइँको अनुकूलन व्यवसाय कार्ड डिजाइन ठीक सुरू गर्नबाट सुरू गर्नुहोस्! - Print Peppermint
यो २१ औं शताब्दी हो- त्यहाँ अधिक विकल्प कहिल्यै भएको थिएन जब यो तपाईंको व्यापार कार्ड अनुकूलित गर्न आउँछ। चतुर डिजाईन ट्रिकहरूबाट जसले मुस्कुराउन रचनात्मक र colorsहरू र आकारहरू जुन आँखा चम्काउँदछन्, त्यहाँ तपाईंको व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्ने क्रममा विचार गर्ने थुप्रै कुरा छ।
त्योले भने, डिजाईन कामको नाइट्टी-ग्रिटिमा तल झर्दा डर लाग्दछ। तपाईं कहिले पनी कुन दिशा पछ्याउने छनौट गर्नुहुन्छ? तपाईं यो कसरी खेल्न सक्नुहुन्छ कि यो अति खेलेको छैन, वा धेरै नरम छ? यहाँ4सुझावहरू छन् तपाइँलाई मद्दत गर्न व्यापार कार्ड डिजाइन मार्गमा सेटअप गर्दा।
कुन तत्वहरू तपाइँ तपाइँको व्यापार कार्डमा समावेश गर्न चाहानुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस्
स्पष्ट रूपमा तपाईले आफ्नो नाम, उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, तपाइँको सम्पर्क जानकारी, र तपाइँको ब्रान्डित लोगो समावेश गर्नुहुन्छ, तर अरू के छ? भनेको भनेको के हो, अर्को कुन जानकारी वा इमेजि .ले तपाईंको ब्यावसायिक कार्डहरूलाई अर्को चरणमा लैजान सक्छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक ग्राफिक डिजाइनर हो जसले एक जीविकाको लागि पुस्तक कभरहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो व्यवसाय कार्ड डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ ताकि यो वास्तवमा पुस्तकको कभर जस्तो देखिन्छ। अझ राम्रो, तपाईं आफ्नै डिजाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो तरीकाको बारेमा सोच्न कोशिस गर्नुहोस् जुन तपाईंको व्यवसाय कार्ड सजिलैसँग सम्पर्क जानकारीको टोकन भैरहेको छ जुन तपाईंलाई सजिलै बेच्दछ।
तपाइँको कार्ड तपाइँको बारेमा के भन्न चाहानुहुन्छ भनेर सोच्नुहोस्
हामीले पहिले नै स्थापित गरिसकेका छौं कि तपाईंको कार्ड शाब्दिक रूपमा तपाईं को हुन्, तपाईं के गर्नुहुन्छ, र तपाईं कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दछ, तर यो डिजाईनको कुरा आउँदा अमूर्त सोच्न कोशिस गर्नुहोस्। के तपाइँ तपाइँको सृजनात्मक सम्भावित व्यवसाय जडानहरू भन्नको लागि तपाइँको कार्ड चाहानुहुन्छ? अत्यधिक पेशेवर? न्यूनतम? यी सबै डिजाइनको माध्यमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ।
एक रमाईलो आकर्षक तरिका मध्ये तपाइँ एक उद्योग को लागी एक रमाईलो स in्केत मा संकेत गर्न सक्नुहुन्छ कस्टम आकार का व्यवसाय कार्ड को माध्यम बाट। भन्नुहोस् तपाईं मोची हुनुहुन्छ - तपाईं जुत्ता जस्तो आकारको व्यवसाय कार्ड सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। सायद तपाई बेकर हुनुहुन्छ - तपाईको कार्ड पाई जस्तो आकारको बनाउन डिजाइन गर्नुहोस्। यी विधिहरूले तपाइँसँग कुराकानी गर्ने व्यक्तिलाई बताउँछ कि तपाइँ तपाइँको काममा समर्पित हुनुहुन्छ तर कि तपाइँ आफैलाई धेरै गम्भीरतासाथ लिनुहुन्न।
व्यापारका केही तरिकाहरूका साथ महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्टहरू हाइलाइट गर्नुहोस्
तपाईको कार्डको आकार र यसमा तपाईले प्रयोग गर्ने रंगहरू वा बान्की बिल्कुल महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईले आफ्नो अन्तिम ब्यापार कार्डलाई अर्को स्तरमा लिनको लागि अन्तिम चोटि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ: फाईल। सुन र तामाबाट होलोग्राफिकमा, दायाँ पन्नीले तपाइँको कार्डको तपाइँको मनपर्ने भागहरूमा ध्यान आकर्षण गर्न सक्दछ।
दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईंले कुनै पन्नी थोरै प्रयोग गर्नुपर्दछ। यो धेरै प्रकाश प्रदूषण जस्तै छ - जब तपाईं यसको धेरै प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले यसको प्रभाव पूर्ण रूपमा हराउँछ। तपाईंको व्यवसायको नाम, वा फोकल डिजाइन पोइन्ट जस्ता चीजहरूमा केहि राम्रोसँग राखिएको फोइल तत्त्वहरू छिन्नुहोस्।
आफूलाई छोटो बिक्री नगर्नुहोस्
छवि स्रोत: https://creativemarket.com/printpixel
यदि तपाईं रचनात्मक हुनुहुन्छ वा बाकस विचारक बाहिर हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफैंलाई विश्वस्त गराउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंको विचारहरू ब्यापार कार्डका लागि मात्र सम्भव छैन, तर फेरि सोच्नुहोस्। सहि डिजाईन पार्टनरले तपाईको जंगली विचारहरुलाई जीवनमा ल्याउन सक्छ।
बोल्ड रंगहरू चाहनुहुन्छ? समस्या छैन। अत्यधिक असामान्य आकार चाहनुहुन्छ? राम्रो लाग्दछ। कागजको सट्टा प्लास्टिक कसरी प्रयोग गर्ने? यो गरेको विचार गर्नुहोस्। साधारणतया, याद गर्नुहोस् जब तपाईं आफ्नो व्यवसाय कार्ड डिजाईन गर्दै हुनुहुन्छ जुन आकाश सीमा हो, त्यसैले कुनै कुरा बाहिर नलगाउनुहोस्।
हाम्रो लक्ष्य मा Print Peppermint तपाइँलाई सपनाहरूको व्यवसाय कार्ड प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु हो। हामीलाई तपाईंको डिजाइन विचारहरू ल्याउनुहोस् र हामी तिनीहरूलाई जीवन दिन्छौं।
Gold गोल्ड पन्नी व्यवसाय कार्डहरू कसरी डिजाइन गर्ने: अन्तिम मार्गनिर्देशन
एक प्रभावी व्यापार कार्डको5आवश्यक तत्वहरू →